Isibuyekezo se-Fun Casino %Isibuyekezo se-Fun Casino eNingizimu Afrika
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-fun casino
Isibuyekezo se-Fun Casino
Isofthiwe:NetEnt, Amatic, Scientific Games, WMS, Novomatic
Ibhonasi Lokukwamukela:100% Ize ifike R1234 Ibhonasi
10 Izikhathi Zokudlala Mahhala Ama-No Deposit Bonus
Njengoba igama lizichaza, i-Fun Casino’s raison d’être ukuhlinzeka ngokuzijabulisa kwe-i-Gaming, ngenkathi inikeza abadlali ithuba elilinganayo lokuwina izipho zemali ezikhangayo. Ikhasino lasungulwa ngo-2017 futhi liphethwe lize liqhutshwa yi L & L Europe Limited. Abaziwa emhlabeni wokuzijabulisa kwe-iGaming, inkampani iyaziqhenya ngamalayisense emidlalo e-Malta Gaming Authority kanye neKhomishini Yezokugembula yase-United Kingdom. Ama-L & L nawo angabaqhubi beziningi zezinye izikhungo zokuqala zokudlala online. Ngakho-ke, sicabanga ukuthi i-Fun Casino iyazi ukuthi ukuzijabulisa ngokugembula kumayelana nani.
Ngakho-ke, i- Fun Casino ithole umtapo wolwazi wayo wemidlalo kusuka kwabanye abakhiqizi beGames abaphambili nabaphambili emhlabeni, okubandakanya umkhiqizo ofana neMicrogaming, NetEnt, Evolution (yebo, amaCasinos ajabulisayo anendawo yokubungaza imidlalo bukhoma), i-Amatic, ne-Elk Studios, njll. Uhlu oluphelele lulandela kamuva. Umphumela uwonke umtapo wolwazi osezingeni eliphakeme, osezingeni eliphezulu onama-slots akudala namavidiyo, ama-jackpots acebile, inqwaba yemidlalo yetafula, imidlalo yekhasino ebukhoma ne-video poker. Ukuzijabulisa kweCasino kuyintokozo ukudlala kumatafula womabili nakububanzi obuhlukahlukene bokuqanjwa kwamaselula.
Kuhlala kumnandi ukuthola izipho zamahhala namabhonasi futhi i-Fun Casino iphila ngokuvumelana negama layo kulokhu. Amalungu abingelelwa ngePhakheji yokwamukela enomusa ngokushesha nje lapho bebhalisa ekhasino. Amalungu amasha angabe esefuna wonke amabhonasi nezinzuzo ezihlinzekwa yikhasino. Lokhu kusekelwa ngamaphromoshini amaningi anenzuzo njalo nezinye izinhlobo zokuphathwa okukhethwayo. Ngemuva kwakho konke, amalungelo we-iGaming kufanele ahlangane lapho wonke amaqembu athintekayo ejabule khona kakhulu.
Lena i-Fun Casino yase Ningizimu Afrika
Kungani abadlali abavela emazweni amaningi ngaphandle kweNingizimu Afrika kufanele bazijabulise? Imithetho yaseNingizimu Afrika iyakwenqabela ukusungulwa kwezindawo zokudlala ku inthanethi. Kodwa-ke, abavimbeli abantu baseNingizimu Afrika ukuthi badlale kumakhasino aku-inthanethi azinze phesheya kwezilwandle. I-Fun Casino iyisikhungo sokugembula esiku-inthanethi esisebenza ikakhulu kubantu baseNingizimu Afrika. Abalingani abaningi be-software abanikela nge-iGaming banikela ngemidlalo etholakala kabanzi eNingizimu Afrika. I-Fun Casino nayo iyashintshana ngeRandi laseNingizimu Afrika.
Ubumnandi ne-iGames abunakuba nomthwalo wemfanelo nokungakhethi. i-Fun Casino ayigcini nje ngokuphila ngokuvumelana nezibopho zalo zokuthola amalayisense kepha kukhathalela ukungafihli lutho nokudlala okunomthwalo wemfanelo. Ikhasino isebenza kuphela nabathuthukisi abanelayisensi yiziphathimandla ezifanayo zokulawula ezibalulwe ngenhla, futhi imidlalo yabo engaqinisekiswa ngokuzimela ngabacwaningi mabhuku bezinkampani zangaphandle ngemiphumela engahlelekile nenobulungiswa.
Amakhodi Ebhonasi Yokwamukela e-Fun Casino
I-Fun Casino ibingelela amalungu amasha ngeBhonasi Yokwamukela yediphozithi yokuqala, ebanika ithuba lokuzijabulisa nokuzijabulisa okukhona.
100% Idiphozithi Emeshayo
Ngemuva kokubhalisa nokwenza idiphozi yokuqala, amalungu amasha athola ibhonasi yediphozithi engu-100% kuze kufike ku-ZAR 1,234 abazoyidlala kweminye yemidlalo abayithandayo.
Lokhu kunikeza amalungu amasha ithuba elikahle lokuzijwayeza umtapo wolwazi we-Fun Casino wezinto ezingaphezu kuka-1 000 kuzo zonke izigaba zemidlalo yasekhasino. Ibhonasi Yokwamukelwa inemibandela elandelayo:
• Imfuneko yokubheja ka-50x
• Ukudlala kufaneleke kuphela kumaslots
• Ungakhansela ibhonasi nganoma yisiphi isigaba
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Akunikezwa yi-Fun Casino
Ngaphandle kokunikezwa ukwamukelwa, i-Fun Casino inezinhlobo eziningi zokwenyuswa okujwayelekile ezenzelwe ukuletha ukuzijabulisa kwakho kwezemidlalo ezingeni elihlukile.
Ama-Cashbacks kukho konke ukulahlekelwa
Ngokuya nge-Fun Casino, ‘Ukulahlekelwa akujabulisi’. Yingakho bethathe isinqumo sokubuyisa u-10% wayo yonke idiphozi eholela ekulahlekelweni. Naku ukuthi kusebenza kanjani:
• Imali ekhokhelwa emuva izogcinwa ku-akhawunti yakho kuyo yonke idiphozi engahlobene nebhonasi
• Izimali ezibuyayo ziyatholakala emahoreni angu-24 ngemuva kokufakwa kwemali
• Izimbuyiselo zizoqoqeka kuze kube yilapho amalungu elahlekelwa, isamba sizodonswa uma sebephumelele
• Chofoza ku-‘Cupha i-Cashback ‘ekhasini le-Cashback ku-akhawunti yakho ukuze uthole
• Uma imali ingeziwe kubhalansi yemali yakho, ungayibheja kabusha noma ukhiphe imali
Amalungu angalindela ukunikezwa kwebhonasi okusha okuthokozisayo njalo ngoLwesihlanu. Kungaba ibhonasi yokulayisha kabusha ekhangayo noma inani elihle lama-spins wamahhala wokudlala izikhala zawo ezizithandayo. Amalungu akhethe ukuthola okunikezwayo kwephromoshini azothola i-imeyili njalo ngoLwesihlanu ekuseni nayo yonke imininingwane edingekayo. Ibhonasi ingafunwa ngenye yalezi zindlela ezilandelayo:
• Sebenzisa ikhodi yebhonasi enikezwe ku-imeyili lapho wenza idiphozi. Ibhonasi izokwengezwa ngokuzenzekelayo ku-akhawunti yakho.
• Ifune kusuka kuthebhu yakho ethi ‘Amabhonasi Atholakalayo’ kusigaba samabhonasi akho e-akhawunti yakho. Uma usufake idiphozi, awudingi ukufaka ikhodi yebhonasi.
Imiqhudelwano yenyanga yekhasino ingaba mnandi impela futhi ikunikeze nethuba lokuwina kakhulu. Yonke imiqhudelwano inezindikimba nezinhloso ezahlukahlukene, lapho amalungu ancintisana khona:
• Abaphumelele emidlalweni yamarounds amaningi
• Ukunqoba okukhulu kakhulu uma kuqhathaniswa nokubheja kwasekuqaleni
• Ukuwina okuningi kulandelana
• Ukunqoba okuphelele kakhulu ngemuva kokukhipha inani elibhejwayo elibekiwe
• RTP sekukonke ngemuva kokuhlukanisa konke ukuwina ngakho konke ukubheja okubekiwe
Abadlali abaku top 9 abaphambili kubhodi yabaphambili bayayifanelekela imiklomelo, isilinganiso sakhona esivame ukubukeka njengokulandelayo:
Indawo yokuqala: ZAR 25,000
Indawo yesibili: ZAR 15,000
Indawo yesithathu: ZAR 5,000
Indawo yesine kuya kwe-9: ZAR 1,000
I-Fun Casino nayo inikela ngezinselelo zanyanga zonke ukwengeza isici esisha senjabulo yemidlalo. Izinselelo ziphinde zishintshe njalo ngenyanga, njengemiqhudelwano. I-Fun Casino iphonsela inselelo amalungu ukuthi azame inhlanhla ezindaweni ezibekiwe futhi afinyelele imigomo ethile yokufanelekela ukuthola eminye imiklomelo. Nazi ezinye izinselelo zakamuva:
• Amalungu afaka umugqa wenkokhelo yamahlathi kuJoker Pro awine iZAR 2,000
• Abadlali abafinyelela ezingeni lomdlalo wamabhonasi ku-Ivanhoe bathole kabili kuze kufike ku-ZAR 4,999
• Isikrini esigcwele sophawu lwe-premium ngesikhathi samahhala sithola ukuwina okuphindwe kabili kuze kufike ku-ZAR 10,000
Imincintiswano Ebukhoma Yekhasino
Elinye izinga elijabulisayo e-Fun Casino linikezwa ngemincintiswano ngaphakathi kwemidlalo yekhasino ebukhoma. Nawa ama-playoffs ambalwa akamuva:
• I-roulette win eqondile bukhoma kwi-Lucky Number 7 ithole i-double win kufika ku-ZAR 1,000
• Abadlali abashaye ama-21 ngamathathu ayisikhombisa bathole i-ZAR 25,000 eyengeziwe
Iklabhu Ye VIP e-Fun Casino
Akukho okubhekiswe ku-VIP Club noma kuhlelo lokuthembeka e-Fun Casino. Lokhu kungaba ngamabomu ngoba i-Fun Casino kufanele ilinganiselwe bonke, hhayi amalungu anelungelo kuphela.
Ungangena kanjani futhi ubhalise online ku-Fun Casino
Ukuvula i-akhawunti e-Fun Casino kulula futhi kuyashesha kangangokuba empeleni kungahle kujabulise. Vele udlule kulezi zinyathelo ezilandelayo:
• Iya ku-Fun Casino
• Chofoza ku-‘Regista ’ekhoneni lesandla phezulu ekhasini lasekhaya
• Efomini lokuqala gcwalisa okulandelayo:
• Imeyili yakho
• Khetha iphasiwedi
• Qinisekisa iphasiwedi
• Khetha imali oyithandayo
• Khetha izwe lakini
• Chofoza u-‘Okulandelayo ’
• Faka okulandelayo kwifomu lesibili
• Igama Isibongo
• I-Postal Code
• Usuku lokuzalwa
• Inombolo yeselula enekhodi yezwe
• Shaya u-‘Chofoza lapha ukuze uqedele ukubhalisa kwakho ’
• Yamukela okulandelayo ekhasini elivelayo
• Inqubomgomo yobumfihlo
• Ungakhetha imiyalezo ye-imeyili neye-SMS
• Chofa ‘Qinisekisa’
Umsebenzi omuhle! Manje usukulungele ukuba nesabelo sakho kumnandi e-iGaming.
IMIDLALO EKU INTHANETHI ONAGYIDLALA e-FUN CASINO
Ingxenye ethokozisa kakhulu ye-Fun Casino kufanele ibe ilabhulali yayo yemidlalo, enikwa amandla ngabakhi bemidlalo yamageyimu abadingeka kakhulu ebhizinisini. I-Who’s iGaming software e-Fun Casino ifaka iMicrogaming, NetEnt, Evolution, Novomatic, Thunderkick, Amatic, NextGen, Bally, Elk Studios, High5Games, Slingshot, IGT, Barcrest, Lotto Warehouse, BGT, Blueprint, Just For The Win (JFTW Imidlalo), i-WMS, ne-SG Gaming. Okungezwe okusha kakhulu kuhlu yi-Play ‘N Go.
Iningi lalezi zinkanyiso zesoftware zigxile kuma-slots, ikakhulukazi ama-video slots. Kepha abaningi babo bathanda iMicrogaming, NetEnt, ne-Play’N Go, njll. Futhi bagxila ngokulinganayo kwimidlalo yetafula naku-video poker. Imikhiqizo efana ne-Evolution Gaming ingochwepheshe bekhasino bukhoma abanengqalasizinda eyindida ebandakanya abathengisi ababukhoma bezilimi eziningi nobuchwepheshe bokusakaza ngejubane. I-Fun Casino futhi ifaka uhla olukhangayo lwama-jackpots, ngokuwina okungaba khona okungena kumakhulu ezinkulungwane.
Ngakho-ke, ilabhulali yemidlalo ye-Fun Casino iyinkundla yokudlala eyi-iGaming eyiyo enezindawo zakudala namavidiyo, kufaka phakathi inqubekela phambili, imidlalo yamakhadi, i-roulette, i-video poker nemidlalo yasekhasino ebukhoma. I-Fun Casino iyisakhiwo esingajwayelekile esiveza imidlalo ye-slingo, inhlanganisela yama-slots ne-bingo. Bonke abathuthukisi bemidlalo baziwa ngokuqopheka kwabo kwemidwebo, imiphumela emihle yemisindo, izici zebhonasi ezisebenziseka kalula, kanye nokusebenza okuphezulu kwemidlalo. Kodwa-ke, abanye baziwa kakhulu kunabanye.
I-Fun Casino iyikhasino eku-inthanethi, engatholwa kuphela futhi idlalwe kuziphequluli ngesikhathi sangempela, kokubili kumadeski nakumadivayisi eselula. Umtapo wolwazi wemidlalo ugcwele ekhasini lasekhaya, futhi uhlukaniswe kahle kuzo zonke izigaba zemidlalo yawo. Ngisho nendawo yokwamukela izivakashi ihlukaniswe yaba yi-‘Video Slots ‘ne-‘Classic Slots’ Kunezigaba ezahlukahlukene zemiqhudelwano, ama-jackpots, imidlalo ethandwayo, edlalwa kakhulu nemidlalo emisha. Asazi nge-Fun Casino ukufaka ‘ubumnandi emuva’ kumakhasino aku-inthanethi, kepha nakanjani le khasino imnandi kakhulu.
Ukuzijabulisa kweCasino mhlawumbe ukuphela kwesikhungo se-iGaming esinika ukubaluleka okulinganayo noma okungaphezulu kuma-slots akudala, okwehlisa ukuboniswa kwevidiyo kwenqwaba yamakhasino aku-inthanethi. Izikhala ezinhlanu ezishisa kakhulu lapha yi-Starburst, i-Deco Diamonds, i-Joker Pro, i-Lucky Links, ne-All Ways Fruits, konke okwakudala awu-3. Amanye ama-reels classic avelele yi-Wild Respin, Mega Joker, Hot Neon, namanye. Izindawo ezithandwa kakhulu ngama-video yiRaging Storms, i-Boom Pirates, i-Webbit White, i-Rainbrew, i-Eggomatic, i-Foxin ‘Twins, i-Finn’s Golden Tavern, ne-Diamond Mine Extra Gold, njll.
I-Slingo ngumdlalo odumile e-United Kingdom kodwa awuvamile kwezinye izindawo. Umdlalo negama lihlanganisa izakhi zamaslots nebhingo. Umdlalo waqala ukwenziwa ngo-1994 futhi ngokushesha wathola impumelelo ebucayi neyentengiso. Kwakunemidlalo engu-12 yasekuqaleni futhi manje kunezinye izinhlobo ezinjengeSlingo XXXtreme, The Price is Right, Kat-Ching, Slingo Rainbow Riches, Who Wants to be a Millionaire, Slingo Centurion, Baking Bonanza, Monopoly Slingo, and Britain’s Talent, and abanye.
AmaJackpots ahlala amnandi futhi ajabulisa ukudlala. I-Fun Casino inenhlanganisela ekhanyayo yama-jackpots aqhubekayo. Yize kukhona ama-jackpots angena ezinkulungwaneni nakumakhulu ezinkulungwane, kuhlale kunethuba lokuba ngusozigidi ngobusuku obubodwa. Ama-jackpots amaCasino ajabulisayo aqukethe ama-classic kanye nama-video slots kanye nemidlalo etafuleni efana ne-Mega Moolah series, i-Hall of Gods, Izigidi Ezinkulu, i-King Cashalot, i-Arabian Nights, i-Treasure Nile, i-Imperial Riches, ne-Tunzamunni, njll, njll.
Ukuzijabulisa kweCasino kugcizelela ezakudala, futhi imidlalo yayo yetafula yokwamukela izivakashi ibonakalisa ngokuphelele ama-ethos. Abadlali bamakhadi abathembele kumakhono abo okudlala, ngaphandle kwenhlanhla encane banebanga eligcwele lezinguqulo zabo abazithandayo abangakhetha kuzo njengeBaccarat Professional Series, iBlackjack Double Xposure, iRoulette: Umkhawulo Ophezulu, iTexas Hold ‘Em Professional Series, Roulette 100 kuya 1, Atlantic City Blackjack, Three Card Poker, French Roulette, 777 Blazing Blackjack, Pontoon, Punto-Banco, ngaphandle kwabanye abaningi.
Indawo yokwamukela izivakashi ebukhoma ye-Fun Casino isezandleni ezinekhono ze-Evolution Gaming. Ngakho-ke abadlali bangalindela isenzo esithile se-adrenaline emidlalweni yetafula abayithandayo, kungaba yi-blackjack, i-baccarat, i-poker, noma i-roulette. Indawo yokwamukela izivakashi iqukethe amatafula amaningi wayo yonke imidlalo, kanye namazinga okubheja ama-wallet ahlukile. Imidlalo ifaka i-Live Auto Roulette, i-Common Draw Blackjack High nezinguqulo eziphansi, i-3-Card Poker, i-Baccarat, i-Live Roulette High nezinguqulo eziphansi, ne-Live Blackjack High ne-Low, njll.
Abathandi be-poker bevidiyo bazithokozise kakhulu e-Fun Casino ngendawo yokubungaza imidlalo, equkethe izingqikithi eziningi nokuhlukahluka. Lokhu kufaka phakathi imidlalo yesandla engu-1, 3, 10, nengama-52, kanye nezinguqulo zepiramidi ezinikela ngokuhle kakhulu. Abathanda ama-slots wevidiyo bangathola zonke izihloko ezithandwayo kule ndawo yokwamukela izivakashi njenge-Jacks noma i-Better, i-Tens noma i-Better, i-Deuces Wild, i-Aces ne-Faces, i-All American Poker, i-Aces ne-Eights, i-Bonus Deuces Wild, i-Bonus Power Poker, i-Deuces ne-Joker, ne-Double Double Ibhonasi Poker, njll.
Ingabe i-Fun Casino iyatholakala nakuselula?
I-Fun Casino nakanjani iyatholakala kumaselula, nezinhlobonhlobo zamadivayisi eselula, ukusho okuncane. Empeleni, i-smartphone noma ithebhulethi yakho iyona nto ehamba phambili yokugembula usohambeni, inqobo nje uma idivayisi igcwalisa imibandela elandelayo:
• Unokuxhumeka kwe-inthanethi okuzinzile (3G, 4G, 5G, LTG, Wi-Fi)
• Iziphequluli zakho ezivamile zeselula njengeChannel, Safari, Firefox, njll.
• Idivayisi ithola ukuthuthukiswa kokuphepha okuvamile
Ipulatifomu yokudlala ka-Fun Casino isekela ngokuzeleko zonke izinhlelo ezinkulu zokusebenza kweselula njenge-Android, iOS, ne Windows Phone, ukukunikeza isipiliyoni sokudlala futhi esingenabumnandi ngenkathi wenza imisebenzi eminingi uhamba. Ukufakwa amakhodi kwe-HTML5 kwemidlalo kulungisa ngokuzenzakalela ipulatifomu kusikrini esincane, kunika amandla amalungu ukuthi adlale nge-HD nokucaca komsindo njengakuma-desktops.
Ngingayidawunilda i-Fun Casino kuselula yami?
Akunasidingo. Akusekho mnandi ekudlaleni kuzinhlelo zokusebenza ezilandiwe. Amakhasino anamuhla, kufaka phakathi i-Fun Casino, awasebenzisi izinhlelo zokusebenza ezingalandwa. Abadlali bakhetha ukwenza amageyimu abo ku-inthanethi, ngesikhathi sangempela kudeskithophu yabo noma kwiziphequluli zeselula. Vele ungene ngemininingwane yakho ekhona, noma uvule i-akhawunti entsha kuselula, bese uqala ukuzijabulisa.
Izindlela Zokuhoxa Ezamukelwa E-Fun Casino
Bank Transfer Yebo Kuze kube yizinsuku eziyi-7
Visa/MasterCard Yebo Kuze kube yizinsuku eziyi-7
iDebit Izinsuku eziyi-1-3
Interac Izinsuku ezingu-1-2
Skrill Izinsuku eziyi-1-3
Neteller Izinsuku eziyi-1-3
Paysafecard Izinsuku ezingu-1-2
Trustly Izinsuku ezingu-1-2
Sofort Izinsuku eziyi-1-3
Giropay Izinsuku ezingu-1-2
Izindlela Ezamukelwe Zokudiphozitha e-Fun Casino
Kusungulwe: 2017 Inombolo yamahhala ye-SA: Ayikho
Opharethwa ngu: L&L Europe Limited I-imeyili: [email protected]
Ilayisensi: UKGC, MGC, Sweden Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Inguqulo Yokulanda: Cha 24/7 365 ukwesekwa: Yebo
Izinzuzo Nezindleko Ze-Fun Casino
Yini Eyenza I-Fun Casino Ukhetho Oludumile Kubadlali BaseNingizimu Afrika?
I-Fun Casino iyikhasino yedijithali esezingeni eliphezulu, efuna ukudala isipiliyoni esijabulisa kakhulu se-iGaming sabahlaseli emhlabeni wonke. Kubadlali baseNingizimu Afrika, kuyindlela yokuzijabulisa kulokhu okulandelayo:
• Inakekela abadlali abavela eNingizimu Afrika
• Wonke amaphromoshini ayatholakala kumalungu ase Ningizimu Afrika
• Wonke amaphromoshini kunenani le Randi ukuze kube lula kubadlali baseNingizimu Afrika
• Usekela ukuthengiselana e-SA Rand
Izikhalazo ze-Fun Casino ZaseNingizimu Afrika
I-Fun Casino yethulwe ngo-2017, kepha asikhumbuli noma yiziphi izinkinga zokuthambisa kusukela ngaleso sikhathi. Ngaphezu kwalokho, asibonanga sikhalazo noma yiziphi izinkomba ezinkulu ezingezinhle ku-Fun Casino esikhathini esedlule. Vele, okwedlule akubonisi intuthuko yesikhathi esizayo, futhi sihlale silapha ukukugcina wazi. Kodwa-ke, uma sinikezwe inzalo kanye nobunikazi bamalayisense we-Fun Casino, asibonanga noma yiziphi izingqinamba ezinkulu.
Ngabe i-Fun Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
Imithetho Yamanje yaseNingizimu Afrika ivimba amakhasino aku-inthanethi abhaliswe ezweni. Kodwa-ke, le mithetho efanayo ayivimbeli abantu baseNingizimu Afrika ukuthi badlale kumakhasino aphesheya kwezilwandle. I-Fun Casino iyikhasino laseYurophu elingaphansi kwemithetho nezimiso zeziphathimandla zesifunda. Ngakho-ke, kuphephile nge-100% ukuthi abantu baseNingizimu Afrika badlale e-Fun Casino.
Ngikhipha kanjani imali kwi-Fun Casino?
Yenza isicelo sokuhoxa esigabeni se-‘Cashier ‘noma’ Banking ‘sekhasino bese wenza okulandelayo:
• Hlola ibhalansi ye-akhawunti yakho ukubona inani elitholakalayo lokuhoxa
• Qinisekisa ukuthi awunakho ukunikezwa kwebhonasi okusebenzayo
• Qinisekisa ukuthi zonke izidingo zakho zokubheja ngamabhonasi nezinye izimo zifeziwe
• Chofoza ku-‘Ukuhoxiswa kwemali ‘, faka inani, bese ukhetha indlela yakho yokukhokha
Uyakhumbula ukuthi kungadingeka ukuthi unikeze omazisi ukuqinisekisa ngaphambi kokuthi i-Fun Casino icubungule isicelo sakho sokuhoxa.
Iyini i-Fun Casino?
I-Fun Casino iyikhasino eku-inthanethi, ebhekela abadlali abavela eNingizimu Afrika nakwamanye amazwe amaningi emhlabeni jikelele. Ikhasino lizinze eYurophu ngamalayisense avela eMalta, United Kingdom naseSweden.
Ngubani ophethe i-Fun Casino?
I-Fun Casino iphethwe futhi iqhutshwa yi-L & L Europe Ltd., inhlanganisela esebenza kwezinye izindawo eziningi eziphumelelayo zokudlala ku inthanethi.
Ingabe i-Fun Casino inezici zokubheja ezemidlalo?
Cha, i-Fun Casino ayinayo incwadi yezemidlalo. Kodwa-ke, eminye yemidlalo kumtapo wezincwadi wekhasino isuselwa kwezemidlalo.
Iphephe kangakanani i-Fun Casino?
I-Fun Casino iphephe ngokwedlulele kumalungu ngenxa yalokhu okulandelayo:
• Inamalayisense okudlala avela kwabaphathi abathathu be-iGaming abahlonishwa kakhulu
• I-Fun Casino ibisemakethe iminyaka engaphezu kwengu-3
• Ikhasino linikela ngemidlalo esezingeni eliphakeme evela konjiniyela abahamba phambili
• I-Fun Casino inezinqubo eziqinile zokuqinisekisa ukuphepha komdlali nokudlala okulungile futhi okunesibopho